Boruu Barraaqaa:- Mootummaan Wayyaanee Dhimma Maastar Pilaanii Magaalaa Finfinnee kan Duraan Dhiise jedhe Amma Maaliif Afarsaa Jira? | robemedia
Home AfaanOromo Boruu Barraaqaa:- Mootummaan Wayyaanee Dhimma Maastar Pilaanii Magaalaa Finfinnee kan Duraan Dhiise...
Boruu Barraaqaa:- Mootummaan Wayyaanee Dhimma Maastar Pilaanii Magaalaa Finfinnee kan Duraan Dhiise jedhe Amma Maaliif Afarsaa Jira?
No finfine master plan
Dhimmi Maastar Pilaanii magaalaa Finfinnee amma dura eegalame mormii jabaa ummanni Oromoo godheen hambisiifamuu danda’ee akka ture ni yaadatama. Yeroo sanitti dabballoonni OPDO arraba damma dibatanii gad bahuudhaan “yoo ummata Oromoo kan hin gammachiifne tahe maaluu ni hafa” jechuun ololaa bahan. Mormiin ummata Oromoo yeroo sana Maastar Pilaaniitti qabatee eegalame garuu salphaatti kan dhaabatu hin turre. Gaaffiin Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa waan taheef boris salphaatti kan aguugamee hafu hin tahu. Haa tahuutii mormii sirnicha hundee irraa raasuu danda’e kana ukkaamsuuf jecha Labsa Yeroo Muddamaa Oromoo irratti labsan. Humnaan ummata afaan qabanii, harka isaa micciiranii, miila isaa hidhanii callisiisuu filatan.
Dhimmi Maastar Pilaanii magaalaa Finfinnee ammas xixxiixaa jira. Miidiyaaleen Wayyaanee gurguddoon EBC fi FBCn dhimma kana qabatanii ifatti gad bahanii jirani. Keessumattuu miidiyaa karoora mootummaa dursee beeksisuudhaan beekamu kan tahe Faanaan (FBC) oduu Muddee 8, 2009 (ALH)tti dabarseen “Maastar Pilaaniin magaalaa Finfinnee dhiheenyatti akka ragga’u Komishiniin Pilaanii Magaalaa Finfinnee beeksise” jechuun gabaasee jira. Gaaffiin as irratti ka’uu qabu, Wayyaaneen maaliif yeroo kanatti dhimma maastar pilaanii kana amma kaasuu filatte kan jedhuu dha. An akka naa galetti sababaan isaa waan gurguddaa lama.
Kan duraa, sirnichi wayta ammaa kana jabaa nama Oromoo hanga danda’e guuree mana hidhaatti naqee jira. Warra silaa ummata kakaasuu fi mormii ummataa qindeessuu danda’u jedhee shakku qabee hidhaa keessatti toyatee argama. Ummata isa hafe ammoo bittaa waraanummaa Komaand Poostiitiin sodaachisee bitaa jira. Ammaantana hamilee fi kaka’umsa ummanni Oromoo qabsoo mirga isaaf qabu onnee isaa keessatti buruqsee, boquu gad cabseen jira jedhee waan of amansiise fakkaata. Kana irraa ka’uun wayta kanatti kaayyoo biyya Oromoo saamuu fi Oromoo salphisuuf qabate san hojii irra oolchuu irraa wanni na hanqisu hin jiru jedhee of amansiisee jira. Oromoon hangamuu baay’atu, hangamuu sadarkaan mormii isaa addunyaatti dhagahamu, toyannoo koo jalaa hin bahu, dirqisiisee doorsisee waanin barbaadu waga’uu nan danda’a jedhee of hubachuu isaa argaa jirra. Dhimma Maastar Pilaanii magaalaa Finfinnee irratti Oromoodhaan salphifamee boquu cabsatee kan ture sirni Wayyaanee amma xiiqii san Oromoo irratti bahachuuf yeroo aanjaa uummadheera jedhee yaadaa jira.
* Boruu Barraaqaa: gulummaa75@gmail.com
Previous articleEthnic tensions in Gondar reflect the toxic nature of Ethiopian politics
Next articleአቶ ጀዋር መሃመድ የኢትዮጵያ ቀኝ ቡድኖች የአማራና የኦሮሞ ብሔርተኝነቶችን መሸሽ እንደሌለባቸው አስታወቁ
Prayer song Esayas Abraham
Sochii Bilbilaa bilbiluu fi Email Erguu/ለመንግስት ባለስልጣናት የመደወል ዘመቻ
Dr. Artist Lammaa Guyyaa Ogumaa Fakkii 2016
This Month: 47776